महामारीपछि धनीहरू झन् धनी र गरिब झन् गरिब ! – Janasamsad
महामारीपछि धनीहरू झन् धनी र गरिब झन् गरिब !
२३ मंसिर २०७८, बिहीबार ११:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । कोभिड-१९ महामारी सुरु भएपछि अर्थतन्त्रसहित विश्वभर सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन् । तर जताजतै अर्थतन्त्र निकै संकुचित हुन पुगेको अवस्थामा पनि विश्वका अति धनाढ्यहरू भने महामारीका बेला झन धनी भएको एक रिपोर्टले देखाउँछ ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको ‘वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट’ (विश्व असमान प्रतिवेदन)अनुसार कोभिड महामारीका बेला धनीहरू झन धनी र गरिबहरू झन-झन गरिब हुँदै गएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९५ पछि सिर्जना भएको सम्पत्तिमध्ये ३८ प्रतिशत हिस्सा १ प्रतिशत मानिसको हातमा पुगेको छ । जबकि केबल २ प्रतिशत सम्पत्तिमाथि मात्रै समाजको तल्लो तहमा रहेको ५० प्रतिशत जनसंख्याको नियन्त्रणमा छ ।
विश्वभरको कुल सम्पत्तिमध्ये ३.५ प्रतिशत सम्पत्ति २ हजार ७५५ अर्बपतिको स्वामित्वमा रहेको छ । जुन दर विश्वभर महामारी फैलिँदा अर्थात् २०२० को सुरुतिर २ प्रतिशतभन्दा थोरैले बढी थियो ।
प्रतिवेदन भन्छ- संसारका अति धनी १० प्रतिशत मानिससँग विश्वव्यापी आयमध्ये ५२ प्रतिशत रहेको छ तर अति गरिब ५० प्रतिशत मानिससँग केबल ८ प्रतिशत आय छ । ‘कोभिड संकटले अति धनी र बाँकी जनसंख्याबीच रहेको असमानता झन बढाएको छ’, प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक लुकास चान्सेलले भने ।
धनी अर्थतन्त्रले व्यापक वित्तीय सहायतामार्फत् गरिबीलाई ह्वात्तै बढ्न नदिएको पनि उनको भनाइ थियो ।
लकडाउनका क्रममा अति धनी केही मानिसले विश्वको अधिकांश अर्थतन्त्र अनलाइनमार्फत् सञ्चालन गरेकाले झन धनी भएको र सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा केही धनीको आम्दानी बढेको हो । ‘धन नै भावी आर्थिक प्रगतिको मुख्य स्रोत मानिने र शक्ति तथा प्रभावको स्रोत समेत बन्दै गएका कारण असमानता थप बढाउने देखिन्छ’, हाल थोरै मानिसको हातमा मात्रै आर्थिक शक्ति अति केन्द्रीकृत भएकोतर्फ संकेत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार ३६ प्रतिशत आय १० प्रतिशत धनीको हातमा रहेको युरोपमा आर्थिक समानताको अवस्था अन्य क्षेत्रभन्दा राम्रो छ । तर, मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा सबैभन्दा बढी आर्थिक असमान (५८ प्रतिशत आय १० प्रतिशतको हातमा) छ । अनलाइन खबरबाट
क्रिकेटको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदुलाई ल्याउने तयारी
सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिनेमा मन्त्री र सांसद सहमत
असमानता र विभेदमा एड्स
१५ मंसिर २०७८, बुधबार ०८:४६
‘केपी ओली सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने सम्भावना देख्छु’
२३ कार्तिक २०७८, मंगलवार २०:०१
राजनीतिमा भक्तिभाव कति जायज ?
१९ भाद्र २०७८, शनिबार १४:०१
स्वास्थ्य सेवामा विभेदीकरणको अन्त्य कहिले ?
१५ भाद्र २०७८, मंगलवार २१:०८